China Ubude boBubude obuthathu 755 810 1064 iDiode esisigxina yokuSuswa kweNwele yeLaser kumzi mveliso kunye nabavelisi |KEYLASER
Ubude beWaveleng kathathu
I-ICELEGEND entsha yiplatfom ye-laser ye-diode ephezulu, exhobisa ngamaza amaza amathathu kunye nomqheba omkhulu webala.
I-Coolite BOLT ithatha i-Ultra Short Pulse kunye ne-High Peak Power, ihambisa i-pulses emfutshane ukutshabalalisa i-follicle yeenwele ngokukhawuleza kombane.
Ukususwa kweenwele zeDiode Laser-K16
Uyilo lwe-injini yokupholisa ePatented Dual Dual Cooling yenza ukuba isebenze ixesha elide, ikhusela umphezulu wolusu kumngcipheko ovuthayo kunye nokwenza unyango olungenakuthelekiswa nanto lukhululekile kwaye alunantlungu.
Umthombo wokukhanya I-Diode Laser
Ubude bamaza 808nm / 808nm+755nm+1064nm
Ujongano lokusebenza 10.4 intshi LCD Touch Screen
Ubungakanani bendawo 12*12mm 12*16mm
Amandla eLaser 1000W
Inkqubo yokupholisa Ukupholisa kwe-TEC Air conditioner +Amanzi okupholisa + umoya
Ukusinda okushiyekile 30KG
1. 10.4 intshi umbala touch LCD ukubonisa, multilanguage selectable.
2. IJamani yangenisa ngaphandle imivalo ye-laser diode.
3. Into yokupholisa yaseJapan yangaphandle.
4. IJamani yangenisa impompo yamanzi, akukho ngxolo kunye nobomi obude.
5. Ukususwa kweenwele kuMgangatho weGolide.
6. I-TEC yenza ukupholisa, iiyure ezingama-24 zisebenze ngaphandle kokuyeka.
7. Unyango oluthembekileyo olukhawulezayo olungakhuselekanga.
Yasekwa ngo-2007, KEYLASER SCI-TECH Co., Ltd., umenzi wezixhobo zonyango zehlabathi jikelele uvelisa iimveliso eziphezulu zoogqirha beplastiki, i-dermatologist, oogqirha kunye nabasebenzi bezempilo.
Ngaphambili: Ukususwa kweenwele ezine ze-laser diode ezine-sysyem
Okulandelayo: ixabiso elisezantsi China Portable 808nm Professional Soprano Isixhobo Medical Isixhobo Ubuhle Machine Diode IPL Shr Ukukhanya Laser Ukususwa Hair